Landa Amabali akudala e-Instagram Abalandeli ▷ ➡️
Khuphela amabali akudala e-Instagram
NgoJanuwari 24, 2019 0 IiCententarios 2772
I-Instagram yinethiwekhi yentlalo eyenzelwe ukwabelana ngeefoto kunye nevidiyo; Ipapashwa ngokuthe ngqo nangokuthe nkqo. Ngaba iqonga lobugcisa evumela ukuba umxhamli andise unxibelelwano lwabo kuwo onke amazwe ehlabathi ukuba ngokusebenzisa iifoto kunye neevidiyo, phakathi kwabanye, kusetyenziswa izixhobo ezifumaneka Play Store (I-Android) okanye i-IOS (i-Iphone) nakwikhompyuter okanye kwikhompyuter, apho unokukhuphela khona amabali e-Instagram amadala kunye nomxholo wenzala ngaphakathi Ukusetyenziswa okufanayo.
Njengoko uyazi, i-Instagram yenye ye iinethiwekhi zentlalo kunye nabalandeli abaninzi kwihlabathi liphela, ithathwa njengenkokeli kwicandelo, okwangoku ibekwe ngesalathiso esiphezulu sabasebenzisi ngenxa yoluhlu olunikezelayo; Ezi zipapashwa ukulungiselela iinjongo zobuqu kunye nentengiso, kunye nokuba ishishini kunye neenkampani. Ngaphandle kwezi fayile, unako Yabelana ngezinye iinethiwekhi zokuncokola, ukuze kuhlangatyezwane nale mfuno kwindawo ephakathi. Oku kuququzelela ukusebenzisana ngakumbi nangakumbi, ngenxa yokuhambelana kwesicelo kunye namanye amaqonga.
Umxholo ofunyenwe kwi-Instagram
Kukho ukwahlukahlukana komxholo okhoyo kuzo zonke iindidi zabaphulaphuli, ukuze wabelane ngamaxesha akhethekileyo, enze amaphulo entengiso, imiyalezo yemfundo okanye ufumane abalandeli, ebonakalisiweyo iividiyo, imifanekiso, amabali kunye nokuhlala nokusasaza ngqo, kusaziwa ngokuba ukusasaza, apho abathathi-nxaxheba banokubuza nawuphi na umbuzo ngokwenza unxibelelwano phakathi kwabalandeli kwisicelo.
Indlela yokukhuphela amabali amadala kwi-Instagram?
Kulula kakhulu, ezi ziqulatho zinokuba khuphela kusetyenziswa izixhobo, ezifumaneka nokuba kuVimba kwindawo yokudlala ye-Android, okanye i-IOS ye-Iphone, apho abanye baya kucela imvume kuyo ukufikelela kwiakhawunti yomntu kwinethiwekhi yentlalo, kunye nekhompyuter okanye ikhompyuter nge-injini yokukhangela ye-Chrome ngokwandiswa okuvumela ukulingisa kwisiphequluli se-Instagram ngokungathi siselfowuni.
Izixhobo ezikhoyo ukuze zithathele ingqalelo
Ukukhuphela ividiyo ye-Instagram
Esi sisixhobo esikuvumela ukuba ukhuphele iifoto kunye neevidiyo ukuze uzishicilele kwakhona instagram, isebenza kwi-Android kunye ne-IOS. Makulandelwe la manyathelo alandelayo:
Cinezela amanqaku aku- imifanekiso kunye neevidiyo zamabali kunye amxesha.
Khuphela ikhonkco, vula Umkhupheli weVidiyo yesixhobo se-Instagram kunye nekopi ukuze ungene kumxholo.
Emva koko ividiyo okanye ifoto iya kuvela; kwaye ingabiwa okanye ikhutshelwe kunye nenketho yokugcina kwiselfowuni.
Esebenzayo kwi-Android, gcina kwaye wabelane ngokulula iifoto, kunye nje konqakrazo, ivumela ukukopa hashtags kunye nezicatshulwa zesicelo Ngaphandle kobunzima, gcina iividiyo, amabali kunye neefoto kugcino lwangaphakathi lweselula ukuvumela ukuba wabelane ngonxibelelwano oluthandayo, ulandela la manyathelo alandelayo:
Khetha khuphela iividiyo ze-Instagram.
Gcina umxholo kwiselula.
Umgcini webali le-Instagram
Sisicelo esikuvumela ukuba ukhuphele amabali akudala e-Instagram, ngakumbi ukuba malunga neevidiyo kunye neefoto, into ebalulekileyo eyimfuneko ukufikelela kumxholo kukuba neakhawunti kwisicelo se-Instagram, ngokusebenzisa la manyathelo alandelayo:
Fikelela kwi-Instagram kwaye ukhangele ibali okanye umxholo.
Cinezela de kuvele imenyu.
Khetha ukhetho lokukhuphela kunye indawo ekuyiwa kuyo (ugcino lwangaphakathi).
Ngokwesiqhelo ukungena ngqo kwiwebhusayithi, kuthintela ukufakwa kweefoto kunye neevidiyo kunyanzelekile ukuba zisebenzise isicelo kwifowuni ephathekayo. Ngalesi songezelelo unokufikelela kwi-Instagram ngendlela efanayo njengoko isetyenziswa kwiselfowuni, izixhobo zekhompyuter ezinjengeevidiyo kunye neefoto ezikhoyo ukuba zabiwe; kwaye ukwazi ukufikelela kumxholo wabalandeli. Iyasebenza iikhompyuter okanye iikhompyuter. Ifakwe ngolu hlobo lulandelayo:
Ngenisa i Ivenkile yewebhu ukusuka kwisiphequluli sikaGoogle.
Beka igama lolwandiso kwi-injini yokukhangela ebonakala kwicala lasekhohlo lesikrini kwaye ucinezele ukungena
I ulwandiso lwewebhu ye-Instagram
Khetha ukongeza kwisongezelelo kwaye siya kufakwa ngokuzenzekelayo kwisiphequluli.
Izibonelelo zezixhobo zokukhuphela amabali akudala e-Instagram
Ziyizicelo ezifanelekileyo kulabo basebenzisi abathanda ukugcina iividiyo kunye nemifanekiso, kunye nenketho yokukhuphela amabali e-Instagram amadala.
Zikhutshelwe ngokukhawuleza, zivumela i ufikelelo
Iifayile ezikhutshelweyo zigcinwe kwifowuni ephathekayo kunye nekhompyuter.
Abathathi indawo enkulu kwisixhobo esiphathwayo
Ukugcinwa kwamabali e-Instagram
Esi siphakamiso senziwe ngokucelwa kwabasebenzisi besicelo, ukuba khumbula amabali okwabelwana ngawo, apho ii-anecdotes ezinokubonwa ngabanye abalandeli ziboniswa ngomfanekiso okanye ividiyo; kwaye zinokupapashwa kwakhona ukukhumbula loo maxesha, ngenxa yolwandiso kunye nezixhobo ezenziweyo ezivumela ukukhuphela amabali amadala e-Instagram, ukongeza kumxholo wesicelo esivela kwiprofayili yobuqu, ukuya kwabanye abalandeli yenza ukwaneliseka okungakumbi phakathi kwabasebenzisi, kwandisa imfuno yokusebenziseka kwayo ukuze ibe nomtsalane ngakumbi.
1 Umxholo ofunyenwe kwi-Instagram
2 Indlela yokukhuphela amabali amadala kwi-Instagram?
3 Izixhobo ezikhoyo ukuze zithathele ingqalelo
3.1 Ukukhuphela ividiyo ye-Instagram
3.2 Khuphela iividiyo ze-Instagram
3.3 Umgcini webali le-Instagram
3.4 Iwebhu ye-Instagram
4 Izibonelelo zezixhobo zokukhuphela amabali akudala e-Instagram
5 Ukugcinwa kwamabali e-Instagram
NgoJanuwari 24, 2019
Umsebenzi wombhali uvela njani ekhaya?
Yintoni intengiso yenethiwekhi yoluntu?